Hentitra ny Filoha Rajoelina Andry :« Esorina amin’ny toerany ireo sefo fokontany manao kolikoly » | NewsMada
Hentitra ny Filoha Rajoelina Andry :« Esorina amin’ny toerany ireo sefo fokontany manao kolikoly »
Hentitra ny filoha Rajoelina Andry teny Bemasoandro, omaly. « Tsy mangarahara ny fizarana ny tapakila fahazoana ny fanampiana ary misy mihitsy mahasahy mitaky vola amin’ny mpisitraka ho tambiny ny tapakilan’ny fanampiana avy amin’ny fanjakana. Hiharan’ny sazy farany henjana ny sefo fokontany mbola minia manao kitranoantrano. Hihafara amin’ny fanesorana amin’ny toerany mihitsy kosa ireo manao kolikoly », hoy izy. Nihaino ny hetaheta sy ny olan’ireo vahoaka ny filoha mivady tamin’izany ka nilazany fa tsy mikorontana akory ny vahoaka. « Mitaky ny anjaranareo ianareo ka antony ihaonako aminareo manokana izany », hoy izy, nialoha ny nizarana ny « Sosialim-bahoaka », teny an-toerana. Nohitsiny fa tsy tokony hanaiky ny hanome ny karnem-pokontany hasiana fitombon-kase nefa tsy nahazo fanampiana akory ny mponina.
Tsy manao ny mangarahara ireo sefo fokontany
Nanteriny fa tsy mametraka ny mangarahara amin’ny fanampiana ireo sefo fokontany sasany. Efa fampitandremana sahady ho an’ireo mpitantana sasany manao ny tsy mety ny nambaran’ny filoha.
« Tsy hadino intsony ny mponina ato amin’ny distrikan’ Atsimondrano », hoy izy. Miisa 40.000 isa ireo tokantrano hahazo fanampiana eny amin’iny faritra iny ka miisa 1000 isan’andro izany. Tsy maintsy misy ny fandaminana amin’ny fizarana ny vary 1 gony 50 kg, ronono mandry mamy miisa roa, menaka roa litatra vita amin’ny soja mba tsy ho mandry miaraka amin’ny tambavy CVO. « Manampy antsika amin’ny fiarovana ny vatana amin’ny aretina covid-19 ny CVO », hoy.
Hatao kianja manara-pentitra « synthétique » Antanikatsaka
Ankoatra izany, nampanantena ny filoha fa hamboarina ho manara-penitra ho lasa kianja « synthétique » ny eo Antanikatsaka, Bemasoandro. Anisany nilalaovan’ireo kalaza amin’ny baolina kitra malagasy toa an’i Abel Anicet sy ry Bolida an’i BAREA an’i Madagasikara. Anisany misitraka ny fanampiana ihany koa ny zokiolona. Nomena ny mari-boninahitra « Ordre National » ny mpampianatra amin’ny sekoly tsy miankina efa misotro ronono Razanakoto Norosoa Eliane Myriam. Voatery manohy ny fampianarana hahazoana vola izy io noho ny fahasahiranana.